Wejigii 2-aad ee shirkii London oo lafilayo in laga soo saaro qodobo muhiim ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wejigii 2-aad ee shirkii London oo lafilayo in laga soo saaro qodobo...
Wejigii 2-aad ee shirkii London oo lafilayo in laga soo saaro qodobo muhiim ah
Muqdisho(SONNA) Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo geba gebeynayaa wejigii 2-aad ee shirkii London ee arrimaha Soomaliya,kaasi oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka Furay Magaladda Muqdisho maalintii shalay ahayd.
Maalintii Shalay ayaa waxyaabaha shirka furitaankaasi looga hadlay waxaa kamid ahaa,horumarinta Qorshaha kala guurka oo ku saleysan Waqti Cad si Mas’uuliyadda Amniga looga Wareejiyo Ciidamadda AMISOM looguna wareejiyo Ciidamadda Qalabka Sida ee Soomaaliya,in la siiwado Taageeradda Beesha Caalamka si loo dhiso Awooda ciidamadda Qaranka Soomaaliyeed si ay u yeeshaan awood ku filan oo ay ku hanan karaan ammaanka Dalka.
Waxaa sidoo kale si weyn loo falanqeeyey ahmiyadda ay leedahay xoreeynta Deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada SHabaab iyo isku dhafka ciidamadda Qaranka,kuwaasi oo ah waxyaabaha ay dowladda Soomaaliy mudnaanta siindoonto.
Inta uu socto Qeybta labaad ee shirka waxa yaabaha diiradda lagu saaraya waxaa kamid ah arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda halka.
Previous articleWasaaradda Amniga XFS oo Faahfaahin ka bixisay Amniga Dalka
Next articleMaxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukuno ku riday Afar Eedeysane oo Al shabaab lala xiriirinaayay